Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Goa: Aiza ireo mpizahatany?
Ny morontsiraka manamorona an'i Calangute any Goa, India dia nahita mpizahatany ambany tetibola betsaka tamin'ny vanim-potoanan'ny Holiday. Namorona tabataba sy fako, tavoahangy labiera foana izy ireo., Saingy tsy nandany vola.
Calangute dia tanàna any amin'ny fanjakan'ny Goa any Andrefan'i India. Mijoro eo amoron'ny ranomasina Arabia, izy io dia misy ny Beach Calangute lava, feno fasika, voahodidina trano fisakafoanana sy bara. Ny lavitra avaratra kokoa, ny Baga Beach dia toerana malaza amin'ny fanatanjahantena rano. Any atsimo, ny rindrina matanjaka ao amin'ny Fort Aguada, namboarina tany am-piandohan'ny taona 1600 teo ambanin'ny fanjanahan-tany Portiogey, dia nanodidina ny tranobe jiro taonjato faha-19.
Ny haben'ny trano fandraisam-bahiny tamin'ity Taom-baovao ity dia 40 isan-jato monja raha ny trano fandraisam-bahiny lasa foana ary ny trano fivarotana dia latsaky ny 50 isan-jato ny orinasa. Ny festival mozika dihy elektronika (EDM) isan-taona dia tsy nisy ary tsapa mazava teo amoron'ny fehin-dranomasin'i Calangute.
Nisy mpandraharaha taxi nilaza tamin'ny mpitati-baovao avy any an-toerana fa ireo mpitsidika mandeha any Goa dia aleony mijanona ao Morjim sy Pernem.
Morjim dia tanàna fanisam-bahoaka any Pernem, Goa, India; eo amin'ny morony avaratry ny havoana renirano Chapora no misy azy. Izy io dia tranon'ny karazam-borona isan-karazany ary toerana fanaovana akany ho an'ny sokatra oliva ridley. Nanjary fantatra amin'ny anarana hoe "Little Russia" ny tanàna noho ny fifantohan'ny mpifindra monina Rosiana monina ao. Pernem dia tanàna sy mpanolotsaina monisipaly ao amin'ny distrikan'i Goa Avaratra ao amin'ny fanjakan'ny Goa any India.
Ireo mpikarakara ny EDM dia nanalavitra ny fanaovana ireo hetsika tany Goa noho ny olana ara-pitsaboana ary nisy fiatraikany ratsy teo amin'ny sehatry ny fizahan-tany izany, hoy ny mpandray anjara fizahan-tany.
Mila fety EDM i Goa ary tokony eo amin'ny tetiandron'ny governemanta izy io hanamafisana ny fizahan-tany ao amin'ny fanjakana. Nilaza ny tompon-trano iray Dominic Fernandes fa "isan-taona dia feno ny trano fandraisam-bahiko ary mandefa ny mpanjifa any amin'ny trano fandraisam-bahiny hafa aho, saingy sambany aho izao no tsy nahazo famandrihana."
Noho ny tsy fisian'ny asa dia nanomboka nanolotra fonosana sakafo maraina ny hotely ary nijanona ho an'ny mpanjifa sy ity orinasa voan'ny trano fisakafoanana sy trano fivarotana ity, ”hoy i Philomena.
Nilaza ny trano fandraisam-bahiny iray fa mazàna dia manodidina ny 5000 1500 ny vidin'ny efitrano nandritra ny herinandro krismasy, saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy maintsy naverin'izy ireo hatramin'ny 1500 ny vidiny. hatramin'ny Rs XNUMX, "hoy izy.
Ny mpiambina Drishti iray any Calangute dia nilaza tamin'ny mpanao gazety iray tao an-toerana fa ny mpizahatany dia tazana vao tonga teny amoron-dranomasina vao tamin'ny 5 ora hariva hampiditra ny Taom-baovao ary nitondra tavoahangin-toaka izy ireo.
555 ny mpandeha fiaramanidina maty tamin'ny 2018: Vaovao tsara ve izany?